Isitudiyo esihle solwandle neSun - I-Airbnb
Isitudiyo esihle solwandle neSun
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguWilli + Judith
Isitudiyo esihle saseCaribbean esibonisa ubuhle bayo. Yimizuzu eyi-10 kuphela ukusuka kwisixeko saseCastries okanye kwiRodney Bay. Yonwabela isidlo sakusasa everandeni, ubukele izikhephe zidlula. Umgama wokuya elunxwemeni nakwivenkile enkulu. Ibhedi etofotofo onokuhamba nayo xa ubuka isiqithi
Iflethi ipholile kwaye inomtsalane ibe yenza abantu bazive besekhaya. Yenzelwe umntu omnye okanye abantu abathandanayo abazimisele ukuchitha inxalenye engcono yeholide yabo bebuka baze bonwabele iindawo ezahlukeneyo ezijikeleze iSaint Lucia kwaye bakhangela indawo etofotofo yokuphumla ngokuhlwa.
Indawo yethu yokubukela iindawo ezikufutshane yindawo efudumeleyo nenobubele ibe yenza uzive uphila phandle nokuba ukwisixeko esikhulu. Ungahamba-hamba ekuseni kakhulu ungaze ulahlekelwe kukubona uLwandle lweCaribbean okanye uhambe emva kwemini ukuze wonwabele ukutshona kwelanga. Xa unxweme luxakeka ngumgama wokuba ungahamba ngeenyawo kwaye zininzi onokukhetha kuzo.
Abanikazi bahlala kwipropati kwaye bayafumaneka ukunceda nokuphendula imibuzo onokuba nayo. I-St .Lucia ngumkhenkethisi oqinisekisiweyo kwaye uyafumaneka ukuze alungiselele kwaye ahambe neendwendwe kwisiqithi sohambo kunye nokundwendwela.